ရှယ်ကောင်းတဲ့ BBQ နဲ့ Hot Pot ကို ဇွန်လကုန်ထိ 15% Off နဲ့စားနိုင်မယ့် La La Lah – FoodiesNavi
ရှယ်ကောင်းတဲ့ BBQ နဲ့ Hot Pot ကို ဇွန်လကုန်ထိ 15% Off နဲ့စားနိုင်မယ့် La La Lah
By yin sandi On June 5, 2018 0
ကဲ..ဟော့ပေါ့နဲ့ BBQဆို အစားတစ်လိုင်းတို့အသည်းစွဲပြီးသားဆိုင်ဖြစ်တဲ့ La La Lah မှာ မိုးရာသီ Promotionတဲ့ဗျို့ ? ဇွန်လကုန်ထိ 15% Premium Buffet Promotion ဆိုတော့ အချိန်မီလေးဆော်သြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ La La Lah လိုမျိုးတကယ်စားကောင်းတဲ့ဆိုင်မှာ ? ဒီလို Promtion ရှိတယ်ဆိုတော့ စားဖူးပြီးသားအစားတစ်လိုင်းတို့အတွက် သတင်းကောင်းလေးပေးချင်သလို မစားကြည့်ဖူးသေးတဲ့အစားတစ်လိုင်းတို့ကိုလည်း လမ်းကြုံလေးလမ်းညွှန်ပေးဦးမယ်နော် ?
La La Lah မှာတော့ Hot Pot စားဖို့အတွက် Hot Pot Broth/ Soup Base တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ပြီး Broth မှာတော့ Chicken /Pork ဆိုပြီရွေးချယ်လို့ရတယ်။ Soup Base မှာတော့ Tom Yum ၊ Tomato ၊ Mala ၊ Sukiyaki ဆိုပြီးကြိုက်နှစ်ရာရွေးလို့ရတယ်။ ကြက်သား ၊ ဝက်သား ၊ အမဲသား နဲ့ပင်လယ်စာ(ငါး ၊ ပုဇွန် ၊ ဂုံး ၊ ဂဏန်း)တွေကို စုံစုံလင်လင်ရနိုင်သလို အသီးအရွက်တွေကလည်း စုံမှစုံပဲ။ အသားလွှာတွေက ပါးလွှာပြီးအရသာစိမ့်ဝင်နေတော့ ကင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဟော့ပေါ့ထဲထည့်စားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မြန်ကျက်လွယ်တော့ လွယ်လွယ်စားလို့ရတယ်။ အသားလေးတွေကလည်း အိစက်ပြီးကျစ်လျစ်နေတာပဲ ။ ဘယ်လောက်စားစားရေမငတ်နိုင်ဘဲကို တသွတ်သွတ်စားချင်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာရယ်။
ပုံမှန်စားနေကျဈေးနှုန်းဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်ကို(၁၃၅၀၀)ကျပ်ပေးရပြီး 15% Off ဆိုတော့ Tax ပါပါပြီးသား(၁၁၄၇၅)ကျပ်ပဲကျမှာနော်။ ဆန်းပြီးသွားစားကြည့်ဖို့ စိတ်ကူးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုအချိန်လေးမှာသွားစားကြည့်ရင် တကယ်တန်တာနော်။ ဆိုင်လိပ်စာကတော့ အမှတ်(၂၅/၉) ၊ ရတနာလမ်း ၊ ကုလားဘုရားမှတ်တိုင်အနီး ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ မနက်(၁၀)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။
Image Source : www.facebook.com/lalalah
In Restaurant Guides Leaveacomment
မိုးအေးအေးလေးကို ပြီးပြည့်စုံသွားစေဖို့ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်ငါးသံရာပေါင်းလေးလုပ်စားကြမယ်
မာလာအသားကင်ရှယ်ကောင်းတဲ့ ရွှေကျိုင်းဟုန် ?